आर्थिक – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौं । साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज सुनको मुल्य नेपाली बजारमा घटेको छ । हिजो ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा खरिद विक्रि भएको छापावाल सुन आज १५ सयले घटेर प्रतितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९२ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । बिहीबार प्रतितोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । त्यस्तै, शुक्रबार चाँदीको मुल्य ३५ रुपैयाँले घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १३ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ । हिजो १३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यो अर्को समाचार, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले कागजात बिना २ लाखसम्मको कर्जा दिने भएको छ । बैंकले एफ वान सफ्ट इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा ग्राहकहरुको सुविधाका लागि “पेडे लोन” नामक नयाँ कर्जा सुविधा सार्वजनिक गरेको हो । हिजो भर्चुअल म
Sapana Sanjal : गत हप्तादेखि निरन्तर उकालो लाग्न थालेको सुनको मूल्य बढ्ने हुने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत अधिकतम ९४ हजार प्रतितोलामा कारोबार भएको सुनको मूल्य सोमबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि हुँदै ९४ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको हो । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यता चाँदी भने सोमबार पनि प्रतितोला ५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै एक हजार ३६० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । `अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु ! `अदुवा´ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु ! अदुवा भान्समा प्रयोग हुने खाद्यबस्तु हो । यसको सेवनले शरीरका लागि निकै फाइदा गर्छ । अदुवालाई बिभिन्न परिका अचार,मा- सु, चिया तथा तरकारीहरुमा मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । यति मात्र नभई अदुवा अन
Sapana Sanjal : काठमाडौँ– साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ ।आज छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन शुक्रवार छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।आइतवार तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । “वर्षौ,देखि हिम,पाइपमा बस्दै,यो जोडी, क’हानी थाहा पा,उदाँ तपाईलाई भा’वु,क बनाउने छ”हेर्नुस् । “सानो हुदाँ हामी,घर बनाएर खेल्ने गथ्र्यौ । हाल एक दम्पति ‘पछिल्लो २२ वर्षदेखि हिम पा`इपमा घर बसालेका छन् । यो जोडीको क’हान